China လမ်းမီးစီးရီး China Manufacturers & Suppliers & Factory
လမ်းမီးစီးရီး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း လမ်းမီးစီးရီး ထုတ်ကုန်များ)
one-လက်နက်မြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီး
လမ်းမီးစီးရီး အဆိုပါလမ်းဆီမီးခွက်အလင်းရောင်တစ် Mian အလင်းအရင်းအမြစ် configuration ကိုအများဆုံးကျယ်ပြန့်လမ်းအလင်းရောင်အင်ဂျင်နီယာများတွင်အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်, မြို့လမ်းများအဘို့သင့်လျော်သည်ကျယ်ပြန့်လမ်းအလင်းရောင်နှင့်အလှဆင် lanes, အအလုပ်လုပ်တဲ့အလင်းရောင် products.The...
IntelligentStreetLamp ၏ဆုံးအဆင့်မြင့်ဗားရှင်းရင်ပြင်, လမ်းများ, လမ်းများအတွက်ပျော်ရွှင်လေထုကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြနှင့်အခြား places.The လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ဗေဒကိုက်ညီမှုများကိုဆွေးနွေးမှုများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ကျယ်ပြန့ထံမှတစ်ဦးကြော့ cylinder.This အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
LED မီးအိမ် Cap စီးရီး
Blade အဆိုပါစီးရီးနဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ် Cap အဓိကအားဖြင့်တမြို့လုံး၏အဓိကလမ်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ရေတိုင်ကီ၏လူမီနီယံအလွိုင်းမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်နက်ရှိုင်းသော anodic ဓာတ်တိုး, နဲ့ကုသနေပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ဒေါင်လိုက်သဘာဝအ convection...
60W ~ 210W LED မီးအိမ်ဌာနမှူး
အဆိုပါ Transformers နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ခေါင်းဆောင်များထိုကဲ့သို့သော, မီးခိုးရောင်အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, အပြာနှင့်လိမ္မော်ရောင်အဖြစ်ကနေရွေးချယ်ဖို့အဆင်းအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ရှည်သောအသက်ထုပ်ပိုးပစ္စည်း LED, LED; ရေတိုင်ကီ၏လူမီနီယံအလွိုင်းမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်း environment.Patented ဒေါင်လိုက်သဘာဝအ...
White ကသူ Ming Xu နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ် Holder
မင် Xu နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ် Holder အဓိကအားဖြင့်တမြို့လုံး၏အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကလည်းမျိုးစုံမူပိုင်နည်းပညာများ, သာလွန်အပူလွန်ကျူးသောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ optical ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ LED လမ်းပေါ်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ မင် Xu နဲ့ LED...
အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်းရောင်, ကြီးမားသောဧရိယာအလင်းရောင်အင်ဂျင်နီယာများ၏အများဆုံးအသုံးများနှင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်အဓိကအား, port, လေဆိပ်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, မြို့စတုရန်း, multilayer ဖလှယ်မှုတံတား,...
60W-120W LED မီးအိမ် Holder
HANXU ဆီမီးခွက် Holder LED မီးခွက်သည်ဦးခေါင်းနှင့်ဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်ဦးခေါင်းကိုမီးခွက်သည်ဦးခေါင်းသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် choose.LED ဆီမီးခွက်ခေါင်းကိုမြင့်မားသောပြင်းထန်မှုနဲ့အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတင်သွင်း polycarbonate ၏ဖန်ဆင်းထားသည်နိုင်ပါတယ်။ LED အလင်းအရင်းအမြစ်မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။...
Round နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ် Holder
LED မီးခွက်သည် Holder မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုနဲ့အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတင်သွင်း polycarbonate နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ LED အလင်းအရင်းအမြစ်မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ LED အလင်း emitting diode (LED) ၏အလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေတိုင်ကီ၏လူမီနီယံအလွိုင်းမျက်နှာပြင်, မကောင်းတဲ့ environment.In...
HEXU အဆိုပါ LED ကိုလမ်းမီးခွက်သည်ဦးခေါင်း၏နာမတော်သည်။ လမ်းပေါ်မှာဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူကိုလည်းဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းအလင်းရောင်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်တစ်ခုဖြစ်တယ်၎င်း၏ light source သည်ကို LED...
အဆိုပါ LED မီးခွက်သည်၏အမည် JINGXU ဖြစ်ပါတယ်။ , ရွေးချယ်ဖို့အဆင်းအရောင်အမျိုးမျိုး, ဒါဟာအစ, တစ်ခုတည်းဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်အလင်းအရင်းအမြစ် LED နိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အပြင်, ဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူတခြားအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲလည်းအလွန်အစွမ်းထက်သည်,...
Noncrystalline ဆီလီကွန်ဆိုလာအကြောင်းသိမှတ်စရာ Module
photovoltaic နေရောင်ခြည်ဆဲလ်ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များနှင့် amorphous ဆီလီကွန်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်တွေခွဲခြားထားပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ, amorphous ဆီလီကွန်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များ၏စျေးကွက်အလားအလာကတိပေးကြသည်, ထိုနည်းပညာကိုပိုပြီးရင့်ကျက်ဖြစ်လာ၏,...
ဒီလမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်၏နာမတော် YINXU ဟုခေါ်သည်။...
High Quality Two-လက်မောင်းလမ်းမီး
အရည်အသွေးမြင့်မား Two-လက်မောင်းလမ်းမီးခွက်နှစ်ခုကွေးလည်ပင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှစ်ခုပုံစံများရှိပါတယ်, တဦးတည်းနှစ်လမ်းအလင်းဖြစ်၏နှင့်အခြားတဦးတည်းဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အသွင်အပြင်လေ့စတိုင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်, ခေတ်ပြိုင်စတိုင်, ဂန္စတိုင်, ရိုးရှင်းတဲ့စတိုင်ဒီဇိုင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။...
ဥာဏ်ပညာသည်လမ်းမီးခွက်သည်အလိုအလျှောက်ချိန်ညှိသည်နှင့်အညီအသိဉာဏ်လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်, လမ်းပေါ်မှာဆီမီးခွက်၏ဝေးလံသီခေါင်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲနားလည်သဘောပေါက်, etc, အ, အဆင့်မြင့်အကျိုးရှိစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်အားလိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအသုံးပြုမှုနှင့် GPRS / CDMA...
ဒါကြောင့်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအထွဋ်နှင့် asymmetry မြင့်မားသောဆီမီးလက်မောင်းနှင့်အဓိကလမ်းမီးအတွက်အသုံးပြုပါဝါ၏အခြားဘက်ခြမ်းက, အနိမ့်အငယ်ပါဝါဘက်အလင်းရောင်ဆီမီးခွက်လက်မောင်းလူကူးကူး, အမြင့်အနိမ့်သောလက်ရုံးတော်လမ်းမီးခွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်, လမ်းမီးခွက်သည်လက်မောင်းဒီဇိုင်း...
Die-သွန်းလူမီနီယမ်နဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ဌာနမှူး
အမြင့် - ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်မြင့်မားသောပြုပြင်နိယာမဖြစ်ပါသည် - ကနဦးအဆင့်တွင်, ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်ပြဒါးငွေ့နှင့် xenon ဓာတ်ငွေ့အနိမ့်ဖိအားရိနာစွဲသည်။ ဤအချက်မှာမီးသီးတစ်ဦးအနိမ့်အလုပ်လုပ်ဗို့အားနှင့်တစ်ဦးကြီးများကလက်ရှိရှိပါတယ်; ရိနာစွဲဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ယင်းကို arc အပူချိန်မြင့်တက်, ပြဒါး,...
မြင့်ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည် 1960 ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်နှင့်တတိယမျိုးဆက်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်လူသိများအမြင့်ဆုံးတောက်ပ High-ပြင်းထန်မှုဓာတ်ငွေ့ရိနာစွဲသောဆီမီးသည်ခံခဲ့ရသည်။ မြင့်ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်အနိမ့်ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ spectrum ကိုနောက်တဖန်အ monochromatic အဝါရောင်အလင်းဖြစ်၏,...
အဆိုပါကွေးလက်မောင်းလမ်းဆီမီးခွက်အလင်းအရင်းအမြစ်အဓိကအားဖြင့်အလင်းရင်းမြစ် LED ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကွေးသောလက်ရုံးတော်လမ်းမီးခွက်ဖြစ်၏အလိုအလျောက် Bende ၏လမ်းဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူရှေ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှမဟုတ်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ချည်ငင်ခြင်းဖြင့်ရည်ညွှန်းပေမယ့်ပိုပြီးတစ်ခုလုံးနှင့်အလင်းတိုင်တူ ။...
မြင့်မားသောပါဝါလမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူထိရောက်စွာအပူနှင့်ရေစိုခံခြင်းနှင့် dustproof နိုငျသော, လူမီနီယံအလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မီးခွက်၏မျက်နှာပြင်ခရမ်းလွန် Anti-ချေးနဲ့ကုသ, နှင့်မြေတပြင်လုံး luminaire သည့် IP65 စံရောက်ရှိသည်။ ပြင်အဖုံး 135 ဒီဂရီမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အတူ PC...
ဖီးနစ်ပေါင်းစပ်မီးအိမ် Phoenix မြို့မင်္ဂလာများနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပုံဆောင်တဲ့ရှေးခေတ်တရုတ်ဒဏ္ဍာရီမှာငှက်ရာပေါင်းများစွာလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ ရဲရင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်တကွ, phoenix နှင့်ဆီမီးခွက်သူတို့တစ်တွေ Wonderland ၌ရှိကြ၏လျှင်အဖြစ်မြေတပြင်လုံးမီးခွက်သည် sublimated ကြောင်းဒါကြောင့်ဧည့်သည်များ,...
တရုတ်စတိုင် Begonia ပေါင်းစပ်မီးအိမ်
မင်္ဂလာတိမ်ပေါင်းစပ်မီးအိမ် ခေတ်မီနည်းပညာ, ရှုခင်းနှင့်အလင်းရောင်နှင့်အတူ spring.Combined ကဲ့သို့တရုတ်ပန်းပွင့် crabapple ၏စိတ္တဇမှတဆင့်ကအမျိုးသားစီးပွားရေးတက်ကြွခြင်းနှင့်စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့်ပြည့်ဝ၏ဆိုလိုသည်ဒီဇိုင်း Theme ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ပေါင်းစည်းနေကြသည်။ လှံတံခန္ဓာကိုယ်အဆိုပါ Begonia...
မင်္ဂလာတိမ်ပေါင်းစပ်မီးအိမ် မင်္ဂလာတိမ်မင်္ဂလာရေနှင့်ချီးပုံဆောင်တဲ့, တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်သင်္ကေတဖြစ်ပြီး, သန့်ရှင်းသောနေ့၏တစ်ဦးဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသို့မှသာလှံတံကိုယျခန်ဓာ, RGB နှင့်အတူညှိနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်လေထု add နိုင်သည့် LED နှင့် Light-emitting ပစ္စည်းများ, ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်...
လမ်းမီးစီးရီး Led လမ်းမီးမီးသီး လမ်းမီးစာအုပ် LED Intelligent လမ်းမီးစီးရီး လမ်းမီးမီးအိမ် Holder Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း ညမီးမီးလမ်း high-ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီးစီးရီး
လမ်းမီးစီးရီး Led လမ်းမီးမီးသီး လမ်းမီးစာအုပ် LED Intelligent လမ်းမီးစီးရီး လမ်းမီးမီးအိမ် Holder